ဧရာဝတီမြစ်ရေကို အံတုဖို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့ ကူညီစို့…. – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဧရာဝတီမြစ်ရေကို အံတုဖို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့ ကူညီစို့….
ဓနုဖြူမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ ယနေ့ (သြဂုတ် ၄ရက်) နံနက် (၇) နာရီ (၃၀) မိနစ်အချိန်မှစတင်၍ မရမ်းချောင်းရေကာတာ ကမ်းထိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်နေစဉ်….
Credit – Aung Ko Phyo
← ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး ဟင်္သာတမြို့ အမှတ်(၅၇ဝ) မြို့မယာဉ် အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းသားများ နှစ်ပတ်လည် တွေ့ဆုံပွဲနှင့် အသင်းဝင် သားသမီးများအား ပညာရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
မွန်ပြည်နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး တက်ရောက် အားပေး →